ကိန်းဂဏန်းများနှင့်ဆော့ကစားခြင်း (Number Games) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကိန်းဂဏန်းများနှင့်ဆော့ကစားခြင်း (Number Games)
ကိန်းဂဏန်းများနှင့်ဆော့ကစားခြင်း (Number Games)
Posted by naywoon ni on Oct 10, 2012 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary | 15 comments
ကျွန်တော်တို့ဟာ တစ်စုံတစ်ခုကို ရေတွက်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်စုံတစ်ရာကို တိုင်းတာ ချင်ရင် ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိန်းဂဏန်းများကို အသုံးပြု ရေတွက်တိုင်းတာကြရပါတယ်…။ တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ ရေတွက်တိုင်းတာနေတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေဟာ မှန်ကန်မှုရှိပါသလား…..။ ဘယ်လောက်အထိ မှန်ကန်ပြီး ဘာတွေလွဲချော်နေပါသလဲ…။ ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်က ဆန်းစစ်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါသလဲ…။ ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါဦး….။
များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ရှေ့က လူတွေ ရေတွက်တိုင်းတာနေတာတွေကို အခြေပြုပြီး နောက်ကနေ လိုက်ပြီး ရေတွက်တိုင်းတာနေကြတာပါ…။ ဘယ်သူတွေက အစကနေပြန်စ ပြီးရေတွက်ဖို့ ကြိုးစားကြပါသလဲ…။ အဲဒိလိုအစကနေ ပြန်စရေတွက်ဖို့ ကြိုးစားတာ ဘယ်နှစ်ယောက်အောင်မြင်ဖူးပါသလဲ…။ စဉ်းစားကြည့်ကြစမ်းပါဦး…။ ဒီလိုပဲ ဆက်လက်စခန်းသွားနေကြရတာပဲမဟုတ်လား…။
အတိအကျ တွက်ချက်ထားတဲ့ အစဉ်အလာရှိတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါစေဦး…။ သူ့ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ ပါဝါ မတည်ငြိမ်တာနဲ့ ခဏလေးအတွင်းမှာလွဲချော်သွားတတ်တာပဲလေ……….။ အဲဒိလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ရေဗူးပေါက်တာမလိုချင်ဘူး ရေပါတာပဲလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ အာဏာရှင်စနစ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ကိန်းဂဏန်းတွေ တစ်ဘက်နဲ့ တစ်ဘက် အတိုးအလျော့လုပ်တမ်းကစားရတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုအဆင့်ကိုလျော့ကျသွားတာပါပဲ…။ ဘာတွေဘယ်လိုပြောင်းလဲလာပြီဆိုပါစေ…။ အဲဒိ Number Game ကစားတဲ့ အကျင့်က မပျောက်ကြသေးဘူး…။ စာရွက်ပေါ်မှာတိုင်းပြည်တည်တဲ့ အဆင့်က မတက်လာကြသေးပါဘူး…။ ကဲ… အဲဒိလို အကျင့်တွေပျောက်ဖို့ အဆင့်တွေတက်ဖို့တော့ ဖိအားကောင်းကောင်းနဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ပါဝါ မေးဖို့ လိုမယ်လို့မထင်ကြဘူးလား……..။ ဖိအား နဲ့ ပါဝါရဲ့ အဆင့်ကို ဘယ်လိုပေးကြမလဲ…။ ပါဝါဆိုတဲ့ အထဲမှာ အားလုံးပါပြီးသားနော်…။ ခိုင်းရုံသက်သက်မဟုတ်ပဲ အလုပ်သမားရဲ့ ရပ်တည်မှု အဆင့်ကိုပေးတာပါပါပြီးသား…။ ဘယ်လောက်ပေးပြီး ဘယ်လို အဆင့်သတ်မှတ်ရမှာလဲ…။ အင်ဂျင်အသစ်လဲပြီး သုံးရမလား …။ စဉ်းစား…………စဉ်းစားကြည့်ကြပါဦး…။ Number Game နော်………။
ကိန်းဂဏန်းတွေကိုကြည့် ပြီး သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်လာခဲ့ ကြတာနှစ်တွေလည်းကြာပေါ့ 
တချို့ ပြင်ပလုပ်ငန်းတွေအထိ အကျင့် ပါနေသေးတယ်
အဖြေရှာဖို့ တော့ ခက်ဦးမယ်ထင်တယ် ။အဖြေရစေဦးတော့ လူတွေချက်ခြင်း
အန်ကယ်ဂျီရေ…။ အဲဒိအင်ဂျင်က တရုတ်စက် တစ်ရက်စုတ် ဆိုရင်တော့ ဟီးးး အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်…။
ကိုဆာမိရေ………. ခက်နေတာက လူတွေဗျ…။ အဲဒိထဲမှာ ခင်းဗျားနဲ့ ကျုပ်လည်းပါတယ်နော်………. သဘောပေါက် :harr:
ဥာဏ်မမီတဲ့အတူတူ လယ်ထဲဆင်းပြီး ဂဏန်းပဲ ဖမ်းတော့မယ်။
ကိုနေတို့ကတော့ တိုတိုနဲ့ ထိထိရောက်ရောက်ပြောထားတယ် … ပညာသားပါတယ် … နားလည်ရခက်တယ် .. တွေးစရာတွေအများကြီးပေးတယ် … ဒါပေသည့် ခိုင်ခိုင်ကတော့ မတွေးတတ်တော့ နားမလည်နိုင်တာအမှန်ပါပဲ …. အချစ်ကိုစားသော ကိန်းဂဏန်းတွေကိုတော့ သိတယ် …
ကျနော်က နှစ်လုံဂဏန်း ချဲဂဏန်းတွက်နည်းများ ပေးသလား..အတိတ်များ ပေးသလားစိုပီး အားတက်သရော ၀င်ကြည့်တာ
ဒီတစ်ပတ် သူ့မြို့က လူတွေ အားလုံးပေါက်သွားကြသတဲ့
အဲဒါ… အဲဒါ (credit toသဂျီး)
ဘိုနီတစ်ယောက် အတွင်းကြေ ဆိုလား
အင်း … ကိုနေရေ … (၂)လုံးတို့ ချဲဂဏန်းတို့ပြောတော့ စိတ်ဝင်စားသား … ကိုပေပြောသလို ဒဂယ်ပေါက်တာလား … ညဘက် မတွေ့တာတောင်ကြာပီနော် … တွေ့မှ ဆွေးနွေးဦးမယ် …. ကြိုက်ဂဏန်းလေးရရင် အီးမေးကို ပို့ထားပေးပါနော် ………
ဗီုက်ဗိုက်ရေ့……… နင့် 35 က ဒီနေ့ညနေ 53 ထွက်သွားပါရောလားဟ :harr:
အချီကြီး ပွသွားတယ် ဆိုပါတော့လေ
ခုရက်ပိုင်း စာရင်းရေးသင်တန်းတက်ရလို့ ကိန်းဂဏန်းများနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတုန်း ….
ကိန်းဂဏန်းတွေအကြောင်း စဉ်းစားရင် ခေါင်းခြောက်လာတယ်။
လူတွေဟာ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ….
ကိန်းဂဏန်းတွေကပဲ သုခ ဒုက္ခတွေ ပေးလိုက်နဲ့……
ဘာဆိုလိုချင်လဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အဖြေထုတ်လိုက်တယ်။
တလက်စတည်း ကြားဖူးခဲ့တဲ့ တရုတ်ပြည်က ဇာတ်လမ်းလေး မျှချင်သေးရဲ့။
ဥက္ကဌကြီးမော် ဆုံးသွားပြီး တော့ တရုတ်ပညာတော်သင် တွေ အင်္ဂလန် ကို အတော်လာခဲ့ကြတယ် လို့ ဆိုတာဘဲ။
ထုံးစံအတိုင်း ပါတီဝင် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း တင်းကျပ်စွာနဲ့ တဲ့။
ဥပမာ- တစ်ယောက်ထဲမသွားရ၊ အနောက်တိုင်းသားတွေ နဲ့ မတွဲရ ဆိုတာတွေ (အနောက်တိုင်း အမူအကျင့် တွေ ကူးမှာစိုးလို့)
စည်းဖောက်ရင် မေ့ဆေးပေး၊ ဂုံနီအိတ်ထဲထည့်၊ တိုင်းပြည်ပြန်ပို့၊ ဒါဏ်ပေး ခံရမတဲ့။
အဲဒီထဲက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတော့ စည်းကမ်းတွေလဲ ဖောက်၊ နောက်ဆုံး ပြည်တော်မပြန် ဘဲ နေခဲ့ပြီး စာရေးဆရာမ လုပ်စားခဲ့တယ်။
ဒါတွေက သူ့ စာထဲ က အကြောင်းတွေပါ။
ပြောချင်တာက အဲဒါတွေ ထက် ကိုနေ ပြောတဲ့ ဂဏန်းများ နဲ့ ဆော့ကစားတာ အဲဒီ အမျိုးသမီးပြောတဲ့ အထဲ ပါလို့ပါ။
သူရဲ့ စာတမ်း အတွက် ဆရာ နဲ့ ဆွေးနွေး စကားပြောပြီး တော့ ဆရာက အဲဒီ စာတမ်း ကိုပြခိုင်းတယ်။
ဒီတော့ သူက အဲဒါ သူမရေးရသေးဘူး။ ရေးဖို့ အကြောင်းတွေ ကို ပြောပြတာ လို့ ဖြေ ခဲ့တယ်။
ဆရာက သူ့ကို အံ့ဩတကြီး ကြည့်ပြီး မင်းဟာက စတောင်မစရသေးဘဲ က Conclusion ဆွဲ အဖြေ ရပြီး ဖြစ်နေပါပေါ့လားတဲ့။
အဲဒီတော့ မှ သူလဲ သတိပြု မိခဲ့တယ်။
သူဟာ တစ်ချိန်လုံး လိုချင်တဲ့ အဖြေ ကို အရင်ထုတ်ပြီး အဲဒီလို ရအောင် အချက်အလက်တွေ ကို ထည့်ကစား ရတာ အကျင့်ဖြစ်နေခဲ့ တာကိုပါ။
ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာလဲ ဒီလို ပါဘဲ ကိုနေရေ။
လူကြီးကြိုက် စကားလုံးတွေ၊ အချက်အလက် တွေ အတွက် အမှန်တရား တွေ က မသိချင်ယောင်ဆောင် ဖယ်ထုတ်ပြီး ဟန်ပြ ဂဏန်း တွေ နဲ့ ကျင်လည်နေတာ အခုထက်ထိပါဘဲ။
ဒီတော့ အမှန် ဂဏန်း တွေ ရဲ့ နောက်မှာ ယူရမဲ့ action တွေ လဲ ပျောက်ပြီး ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ အတုအယောင် ဂဏန်း တွေ က နှစ်ပေါင်းများစွာနေရာယူခဲ့ တာ ……
ဒီအချိန် တကယ်ဘဲ မြေလှန် ရဲ ကြမှာလား။
အဲလို မလုပ်ရဲ (တနည်း) မလုပ်ရ သ၍ တိုင်းပြည်က ဘယ်တော့မှ တိုးတက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်မမှာ မေးခွန်းတစ်ခု အမြဲရှိတယ်။
“အဲလို အမှန်တရား ကိန်းဂဏန်း တွေကို တကယ်ဖော်ထုတ် ခွင့် ပါဝါပေးရင်ရော အဲဒီ ပါဝါရှိ ဝန်ထမ်း တွေ ရဲ့ ရာနှုန်း ဘယ်လောက်က လုပ်ချင်စိတ်ရှိကြလဲ”
အန်ကယ်ဂျီး ကတော့ အင်ဂျင်လဲ ပစ်မယ်ပြောနေပြီ လေ အရီးရဲ့………. လုပ်ချင်စိတ်ရှိမဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ မွေးထုတ်ပေးရမှာပေါ့……… ကျွန်တော့ သဘော အတိုင်းသာဆိုရင် တက္ကသိုလ် တွေကနေစပြီး စည်းစနစ်ကျနပြီး သေသပ်တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ ဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးစေ့ချင်တာပဲ…….. ။ ဖြစ်စေ့ချင်တာပြောတာနော်……..။ ကျောင်းပြီး တွေ့တဲ့အလုပ်ကောက်ဝင် ဘာမှအတွေ့အကြုံ မရှိ အစိုးရ ၀န်ထမ်းဘ၀ မှာလည်း တော်တော်များများက ဘာသင်တန်းမှ မပေးနိုင်ပဲ ဒါ…….. ဒီလိုလုပ်ဆိုပြီး အရာရှိက ဒါမှ မဟုတ် တာဝန်ခံ တစ်ယောက်က သူလုပ်နေကျအတိုင်း ပုံစံချခိုင်းထားတာပဲ လုပ်နေကြရတာ….။ အဲဒိပုံစံကလည်း တစ်နေရာ တစ်ရုံးတစ်မျိုး ဆိုတော့ ဘာမှ တစ်ပြေးညီမဖြစ်ကြပါဘူး…။ စာရင်း ကို ဒီလိုလိမ်ရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် အသင်ခံရဖူးတယ်…။ နောက်တစ်လလောက်ကြာတော့ ကျွန်တော်က သင်ပေးတဲ့သူရဲ့ ဆရာဖြစ်သွားတယ်…။ ဆရာထက် တပြည့်လက်စောင်းထက်တာပြောပါတယ်………..။